Sudan oo si kulul ula hadashay Itoobiya - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Wararka Sudan oo si kulul ula hadashay Itoobiya
Muqdisho (Walwaal.com)- Suudaan waxay dhexda u gashay khilaaf muddo toban sano ah u dhaxeeyay Itoobiya iyo Masar oo ku saabsan biyo xireenka Itoobiya ay ka dhiseyso wabiga Niil bilihii ugu dambeeyayna waxaa ku dhacay isbadal weyn oo xagga aragtida ah.
Marka laga wada hadlayo biyo-xireenka Itoobiya, hadalladii Suudaan ee soo dhoweynta lahaa waxay isku beddeleen kuwo shaki iyo caro ay ka muuqdaan.
Isbadalkan, ayaa ka tarjumaya saameynta sii kordheysa ee milatariga ay ku leeyihiin dowlada kumeel gaarka ah taasoo la doonayo inay dhabaha u xaarto nidaam dimoqraadi ah ka dib markii xukunka laga tuuray hogaamiyihii mudada dheer xilka hayay Cumar Xasan Al-Bashiir.
Sare u kaca khilaaflka diblomaasiyadeed ayaa kordhay markii uu soo dhawaaday xilli roobaadkii Itoobiya ay balan qaaday inay billaabayso biyo xireenka kaas oo buuxsami doono sanadka labaad iyada oo aan wax heshiis ah laga gaarin sida loo samaynayo iyo hannaanka loo marayo.
Previous articleGuddoomiye cusub oo loo magacaabay Degmada Xamar Jajab
Next articleThree people were killed and another one injured in Mogadishu Wednesday following a car bomb attack.